जेठ महिनाको मासिक राशिफल ! भगवान श्री पशुपतिनाथको दर्शन गर्दै हेर्नुहोस् महिनाभरिको तपाईंको राशिफल…. « Onlinetvnepal.com
जेठ महिनाको मासिक राशिफल ! भगवान श्री पशुपतिनाथको दर्शन गर्दै हेर्नुहोस् महिनाभरिको तपाईंको राशिफल….
Published : 15 May, 2019 2:49 pm
तपाईका लागि सूर्य बाधा ब्याबधान हटाउनका लागि । कार्य सम्पन्नका लागि प्रवेश गर्नुभएको छ । पर निर्भरता समाप्त हुनेछ । आफ्ना सबै काम पूरा हुनेछन् । जीवन सफलतातर्फ अघि बढ्नेछ । व्यवहारमा भने संयमिता राख्नुहोस्।
अब सूर्य यो राशिमा नै रहने भएकाले अति शुभ छ । तपाईका लागि मंगलकारी हुनेछ । कयौ प्रकारका सफलता चुलिनेछन् । धन प्राप्तिको योग छ । कार्य अझै विस्तार हुनेछ । नया व्यापार प्रारम्भको योग छ । यो व्यापार ब्यवसायले तपाईलाई मनग्गे फाईदा दिनेछ ।
द्वादश सूर्य तपाईको राशिमा प्रवेश गर्दैछ । यसले तपाईलाई हैरानी दिनेछ । आर्थिक कार्यमा ज्यादै सावधानी राख्नुहोला नत्र यसले असर गर्नेछ । हानी नोक्सानी हुनेछ । वाहनको प्रयोगमा अति होसियारी अपनाउनुहोला । लापरवाहीले जीवनकै क्षति बनाउने योग छ।
यो राशिका लागि एकादश सूर्य प्रवेश हुँदैछ । आत्मविश्वासमा वृद्धि गराउनेछ । काम समयमा नै पूरा हुँदा हौसला बढ्नेछ । आध्यात्मिक उन्नति हुने देखिन्छ । परिवारमा खुशियाली छाउनेछ । एक प्रकारको उमंग भित्रिदैछ । मनमा शान्ति र संबृद्धिले साथ दिँदा हर्सित भएर १ महिना वित्नेछ ।
दशम सूर्य प्रवेश गर्दैछ । यो राशि भएकालाई सूर्यको असरले मित्रहरुमा वैचारिक मतभेद आउँनेछ । राम्रा व्यक्तिसँगको सम्बन्ध टुट्नेछ । संयम रहेमात्र लाभ होला नत्र हानी हुनेछ । कार्यमा प्राथमिकता दिँदा धेरै राम्रो हुनेछ । धैर्यता राख्न सके लाभ लिन सकिने कार्य बन्नेछन् । हतार गरे गुम्नेछन् ।
नवम सूर्य तपाईको राशिमा आउँदैछ । यसले कार्यमा बदलाव ल्याउनेछ । मनमा शान्ति, व्यापारको विस्तार हुनेछ । मित्रसँग सम्बन्ध सुधार हुनेछ । घर–परिवार र समाजमा वर्चस्व बढ्नेछ ।
यो राशिका लागि सूर्य अष्टम रहेको छ । यसैले गर्दा तपाईलाई निक्कै ठूलो सफलता मिल्नुपर्ने हुन्छ । तर खर्चको कारण तपाईलाई हैरानी हुनेछ । खर्च निक्कै नै बढ्नेछ । व्यापारमा उच्च सफलता देखिन्छ । शान्त र धर्य भएर कार्य गरे मनग्गे लाभ मिल्नेछ ।
सप्तम सूर्य तपाईको राशिमा प्रवेश गर्नेछ । यसले तपाईलाई शुभ नै शुभ रहेनछ । घरमा मांगलिक कार्य आयोजन गर्ने योग बनेको छ । जसले लाभ भित्र्याउनेछ । कार्य अझै विस्तार हुनाले व्यपार ब्यवसाय गर्नेका लागि लाभ नै लाभ छ । अधिकारीको मद्तले धेरै काम समयमा नै पुरा हुनेछ ।
षष्ठम सूर्य धनु राशिमा प्रवेश गर्दैछ । यसकारण यो राशि भएकाले कडा मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । सफलताका साथ चिन्ताजनक समाचारले केही दुखी बनाउँनेछ । परिवारमा जिम्मेदारी बढ्नेछ । सावधानभएर काम गर्नुहोला । त्यति उत्तम नभएकाले कडा परिश्रम जारी राख्नुहोला ।
यो राशिका लागि पंचम सूर्य प्रवेश हुनेछ । यसकारण तपाईका कुनै रोकिएका ठूला ठूला कामहरुपनि यो अवधिमा पूरा हुने दिशातर्फ जानेछन् । सम्धि, सम्धिनीसँग गरेको सहकार्यबाट निक्कै लाभ लिन पाउनुहुनेछ । व्यापारमा वृद्धि हुनेछ ।
चतुर्थ सूर्य तपाईको राशिमा प्रवेश गर्दैछ । यसले प्रतिष्ठामा वृद्धि दिलाउनेछ । केहिदिनदेखि आर्थिक संकट झेल्दै आउनुभएको थियो । अब त्यो दिन टाढा भाग्दैछ । धन लाभ मिल्नेछ । मनग्गे आर्थिक उपार्जन गर्नुहुनेछ । मनमा खुशी छाउनेछ । परिवारमा हर्ष बढ्नेछ।
यो राशिका लागि तृतीय सूर्य प्रवेश गर्दैछ । यसले धेरै नै लाभदायक बढाउनेछ । वाहनको सुख प्राप्ति हुने देखिन्छ । मोटरसाईकल, साईकल, गाडी खरिद गर्न सक्नुहुनेछ । परिवारमा मान–सम्मान बढ्नेछ । रोकिएका अनेकौँ कार्य बन्नेछन् । कार्य सफलताबाट आर्थिक सुधार हुनेछ । मनमा खुशी बढ्नेछ ।